Pyidaungsu MM လက်ကွက် စာရိုက်နည်း | MYANMAR UNICODE® MIGRATION
ပါဠ်ဆင့် ( စာလုံးဆင့် )များ ရိုက်သွင်းနည်း
ဋ္ဌ ဋ ္‌ ဌ # F‌ X
ဏ္ဌ ဏ ္‌ ဌ P F‌ X
ဍ္ဎ ဍ ္‌ ဎ ! F‌ ~
ဏ္ဍ ဏ ္‌ ဍ P F‌ !
သုည ၀ [key 0] နှင့် ဝလုံး ဝ [key W] မတူပါ
စလုံးရပင့် စျ နှင့် ဇမြင်ဆွဲ ဈ [key Q] မတူပါ
ညလေး ဉ [key N] နှင့် အက္ခရာအု ဥ [key U] မတူပါ
သရရစ် သြ နှင့် အက္ခရာအော ဩ [key ]] မတူပါ
စာလုံးအချို့ကို နမူနာအဖြစ် အောက်ပါဇယားတွင် ရိုက်နှိပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။ ရရစ် အက္ခရာကို ဗျည်းနောက်မှ ရိုက်ရပါမည်။ [ို ၊ုံ ၊ံ့ ] ကဲ့သိုသော အပေါ်အောက် စာလုံးများကို နှစ်သက်ရာ အရင်ရိုက်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းအစီအစဉ်များကို တမျိုးတည်း ဖြစ်စေရန် အလိုလျောက် ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မည်။
ကျူ က ျူu s l
ကျို က ျို u sdk
ကျောင်း ေကျာင်းau s m if;
ကျွမ်း က ျွမ်း u s G rf;
ကြီး ကြီးu j D ;
ခြုံ ခြုံ c j k H
မြို့ မြို့ r jdk h
ကြွေးေကြွးa u j G ;
မြှင့် မြှ င့် r j S ifh
ငြှိုး ငြှိုးi j Sdk ;
စက္ကူ စ က္ကူp u F u l
လိမ္မော် လိမ္‌ေ မာ် (သို့) vdr Far m f(or)
လိ‌ေမ္မာ် vda r F r m f
အင်္ဂါ အ င်္ ဂါt ifF * g
အင်္ကျီ အ င်္ က ျီt ifF u s D
သင်္ဘော သ င်္ ‌ေ ဘာo ifFab m
ဥက္ကဋ္ဌ ဥ က္က ဋ္ဌ O u F u # F X
ဂုဏဝုဍ္ဎိ ဂုဏ ဝုဍ္ဎိ* k P W k ! F ~ d
သဏ္ဌာန် သ ဏ္ဌာန်o P F X mef
ဘဏ္ဍာ ဘ ဏ္ဍာb P F ! m
ဣန္ဒြေ ဣ န္​ေ ဒြ(သို့) EeFaK j (or)
ဣ ​ေ န္ဒြEae F K j
ခြင်္သေ့ ခြင်္ ​ေ သ့c j ifFao h
သိင်္ဂီ သိင်္ ဂီodifF * D
သင်္ဂြိုဟ် သ င်္ ဂြိုဟ်o ifF * jdk [ f
သင်္ချိင်း သ င်္ ခ ျိင်း o ifF c sdi f;
ဓါတု (သို့) ဓာတု ဓါတု(သို့) ဓာတုL g w k (or) L m w k
ပုဏ္ဏေးမ ပုဏ္​ေ ဏးမ (သို့) y k P FaP ; r(or)
ပု​ေ ဏ္ဏးမ y kaP F P